Obere kalori nke calorie 900 | Nutri Nri
Nke a bụ nri hypocaloric nke enyere maka ndị ahụ niile chọrọ itinye atụmatụ ọnwụ ma ọ bụ usoro mmezi, ọ bụ atụmatụ dị mfe iji mezuo. Ugbu a, ọ bụrụ na ịmee ya kpam kpam, ọ ga-enye gị ohere ida ihe dịka kilogram 2 naanị n’ime ụbọchị asatọ.
Ọ bụrụ na ị kpebisiri ike itinye nri a n'ọrụ, ị kwesịrị ịnwe ahụike dị mma, drinkụọ mmiri dị ka o kwere mee kwa ụbọchị, mee ka nri gị na-atọ ụtọ na ihe na-atọ ụtọ ma jiri nnu na mmanụ oliv rie nri gị. Ga-emeghachi menu akọwapụtara n'okpuru kwa ụbọchị na ị na-eri nri.
2 Onye ga-eme nri calori 900?
3 Kilo ole ka ị na-efu?
4 Nchịkọta izu
5 Ndụmọdụ Pụrụ Iche
6 Ntuziaka iji mepụta nri hypocaloric a
Nri ụtụtụ: 1 infusion gị oke, 1 citrus mkpụrụ 1 tost gbasara na ìhè chiiz.
Etiti ụtụtụ: yogọt 1-abụba-abụba.
Nri ehihie: 150g. ọkụkọ ma ọ bụ azụ, 1 na-eje ozi nke agwakọta salad na 1 mkpụrụ.
Etiti ehihie: ntinye 1 nke ịhọrọ na 50g. skim chiri.
Nri: 1 infusion nke ịhọrọ, 1 citrus mkpụrụ na 1 tost gbasara na ìhè jam.
Nri abalị: 100g. anụ, akwukwo nri ofe 1 infusion. I nwere ike iri oke ofe ịchọrọ.
N’okpuru, ị ga - ahụ nchịkọta nhọrọ kwa izu iji mee nri calori 900.
Onye ga-eme nri calori 900?
Ọ bụ ihe a pụtara nlezianya nri, ebe ọ bụ naanị na ọ na-enye anyị calorie 900 kwa ụbọchị. Kedu nke bụ obere dose na dị ka ndị dị otú a, ọ dịghị atụ aro maka ndị na-eme mmega ahụ siri ike. N'ihi ya, ị nwere ike ime ya ndị niile nwere ezi ahụike ma nwekwa oge ezumike nke ndụ. Ma ọ bụghị ya, ha ga-enwe mmetụta na-enweghị ume ma nwee ike ịdị na-atụgharị uche n'ehihie. Ọ bụrụ na agbasoro ya na akwụkwọ ozi ahụ, ọ bụ nri dị oke mma, nke na-enye anyị ohere idalata ngwa ngwa na obere oge. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ kilo ole na ole na oge ndekọ na ị dị mma, mgbe ahụ ị nwere ike ịhọrọ maka nri a.
Kilo ole ka ị na-efu?
Site na nri calori 900 ị nwere ike iru tufuo ihe karịrị kilo abụọ kwa izu. Ọ bụ eziokwu na a pụghị inye ọnụ ọgụgụ ziri ezi, ebe ọ bụ na otu onye ahụ agaghị aha otu. Ọ bụrụ na mgbakwunye na nri ahụ n'onwe ya, anyị na-enyere obere mgbatị ahụ aka, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ naghị adị oke ike, mgbe ahụ anyị nwere ike ịgafe kilo atọ na ọkara kwa izu. Typedị nri a adịghị mkpa iji mee ka ha gbatịkwuo oge, mana iji gbalịsie ike na-eri nri n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji nwee ike iweghachi mmetụta ahụ.
Nri ụtụtụ: ihe ọ juiceụ orangeụ oroma oroma na gram 30 nke achịcha ọka wit na otu nke cheese ọhụrụ.
Etiti ụtụtụ: Otu mkpụrụ - 200 grams
Nri: gram 125 nke gram broccoli dị gram 120
Nri: Yokọt ejiri skimmed
Nri Anyasị: akwa omelette na akwa ọcha na mmanụ a vegetableụ. Maka ihe eji megharịa ọnụ, yogot sitere n'okike
Nri ụtụtụ: Ntinye na 35 grams nke achịcha ọka wit na mpekere atọ nke toki ma ọ bụ ọkụkọ
Etiti ụtụtụ: yogọt dị ala
Nri: gram 150 nke anụ ọkụkọ ma ọ bụ sie, na salad tomato, letus na yabasị
Nri: Yogọt eke ma ọ bụ ihe ọ orangeụ orangeụ oroma
Nri Anyasị: 200 grams nke grilled vegetables na 100 grams nke toki ma ọ bụ anụ ọkụkọ
Nri ụtụtụ: Otu kọfị ma ọ bụ jiri mmiri ara ehi skimmed, gram 30 nke achịcha ọka wit na ngaji nke marmalade na-enweghị shuga
Etiti ụtụtụ: gram 200 nke mkpụrụ osisi
Nri: gram iri abụọ na ise na akwụkwọ nri gram 125, masịrị gị
Nri: 30 gram nke ọka wit dum na cheese na-agbasa 0% abụba
Nri abalị: gram 150 nke prawns na gram 125 nke ero na yogọt nkịtị.
Nri ụtụtụ: gram 30 nke ọka niile na yogọt nkịtị
Nri: gram 150 nke toki na akwụkwọ nri
Nri: Otu iko mmanya oroma
Nri Anyasị: Eggplant stuffed na pịa cheese ma ọ bụ ìhè cheese na òkè nke mkpụrụ osisi
Nri ụtụtụ: 30 grams nke toasted achịcha na abụọ Mpekere nke Serrano ham
Nri ehihie: 200 gram nke azụ na tomato na salad kukumba
Nri abalị: gram 150 nke ọkụkọ ma ọ bụ toki na akwụkwọ nri na yogọt
Nri ụtụtụ: Mpekere achịcha, ya na Burgos cheese na infusion ma ọ bụ kọfị nwere mmiri ara ehi ghere eghe.
Nri: Anụ anụ nri na broccoli
Nri: Mpekere achịcha nwere mpekere 4 nke toki
Nri Anyasị: gram 150 nke azụ dịka bass mmiri na gram 100 nke chard ma ọ bụ inine na yogọt sitere n'okike.
Nri ụtụtụ: ihe ọ juiceụ juiceụ okike, gram 30 nke ọka niile na otu nke cheese ọhụrụ
Etiti ụtụtụ: Mpekere achịcha ọka wit na mpekere ọkụkọ
Nri: gram 40 nke pasta dummeal na gram iri abụọ na ise nke toki eghere eghe na nnukwu efere salad.
Nri: 250 ml nke ihe ọ juiceụ juiceụ mmiri ma ọ bụ mkpụrụ osisi
Nri Anyasị: a pụrụ iche nke eke tuna na French omelette nwere otu akwa na ọcha abụọ. Soro otutu nkpuru ahihia ndu.
Ndụmọdụ Pụrụ Iche
Mgbe ị na-akwadebe nri dịka anụ ma ọ bụ azụ, ọ kacha mma iji ngaji mmanụ oliv na nri ehihie na nke ọzọ na nri abalị. Iji tinyekwuo ekpomeekpo, ọ dị mma mgbe niile na kama iji nnu ma ọ bụ sie, anyị na-eme nke a site na ịgbakwunye ngwa nri. Ebe ọ bụ na ha ga-agbakwunye ekpomeekpo ma ọ bụghị calorie. N'aka nke ozo anyi aghaghi aụọ mmiri buru ibu, dịkwa n'ụdị infusions kwa ụbọchị. Otu lita na ọkara ga-enyere anyị aka ịkwụsị nsị ma mee ka ahụ dị ọcha.
Anyị ga-edebe leta ahụ nri ise na anyị kwuru. Ọ bụ eziokwu na anyị nwere ike ịgbanwe akwụkwọ nri ma ọ bụ ọkụkọ maka toki ma ọ bụ gbanwee n'etiti azụ dị iche iche anyị nwere. Mana mgbe ọ bụla na ego ole akwadoro ka ị nwee ike isoro nri 900 kalori. Banyere nri akwadoro, oven, steamed ma ọ bụ grilled dị mma mgbe niile.
Ntuziaka iji mepụta nri hypocaloric a
Nke mbu, anyi aghaghi inwe ezigbo mkpali. Iji mee nke a, ọ ga-abụ iche maka ebumnobi anyị ma tinye ike anyị na ya, n'ihi na emezuru ya. Ozugbo anyị hụrụ nsonaazụ mbụ, anyị ga-ewere nri kalori 900 ka mma.
Gbalịa ka ị na-emega ahụ́, ma ghara ịna-emebiga ihe ókè. Ije ije nwere ike ịbụ otu n’ime uru ga-aba uru.
Zere nri na-atọ ụtọ ma ọ bụ nke nwere abụba oge niile. Mgbe ị nwere oge adịghị ike, ọ ka mma mgbe niile ịnwe infusion ma ọ bụ mkpụrụ osisi jupụtara na mmiri dịka mpempe mmiri ma ọ bụ mkpụrụ osisi strawberries.
N'otu ụzọ ahụ, anyị ga-echefu ihe ọ drinksụ drinksụ mmanya dị nro ma ọ bụ ndị nwere nnukwu shuga. Ihe kachasị mma bụ ịhọrọ otu mkpụrụ osisi ma ọ bụ mee ihe ọ juiceụ juiceụ sitere na ụlọ.
Otu ugboro n'izu, ị nwere ike iwebata anụ uhie, ọ bụ ezie na toki ma ọ bụ ọkụkọ ka mma mgbe niile, maka protin ya yana maka ọdịnaya ya dị ala.
Ọ bụrụ na ike gwụ gị mgbe niile nke ọkụkọ ma ọ bụ toki anụ, ị nwekwara ike ịgbakwunye ọnụ ọgụgụ lentil ma mee efere nke ndị a na akwụkwọ nri. Ha na-enye anyị protein n’otu oge ahụ dịka fiber na vitamin ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nkwere maka enyemaka » Obere kalori nke calorie 900
Enwere m hypothyroidism na anaghị m ewere yogọt, olee ụdị dị iche
Zaghachi to anlivi23